Tsipy kanetibe : ho any Sénégal izay ho mpandresy | NewsMada
Tsipy kanetibe : ho any Sénégal izay ho mpandresy
Hanamarika ity faran’ny herinandro ity, ny fifaninanana tsipy kanetibe, hiadiana ny tapakila, hiatrehana ny fifaninanana iraisam-pirenena hatao any Sénégal, ny volana mey ho avy izao.
Hotanterahina, etsy amin’ny kianja CBT Mahamasina, ny asabotsy 14 sy ny alahady 15 avrily ho avy izao, ny fifaninanana tsipy kanetibe, olon-droa miaraka “doublette boss”. Hanan-danja io fihaonana io satria hisolotena an’i Madagasikara, amin’ny “ 1 è open international de Dakar”, hatao any Sénégal, ny 11 – 13 mey 2018, izay ho mpandresy.
Afaka mifidy izay ho mpilalao fahatelo, hanampy azy, ny ekipa mahazo ny fandresena. Hiendrika fiadiana ny ho tompondaka eran-tany kely izy ity, satria handray anjara amin’io avokoa ireo andrarezina eran-tany, toa an-dry zareo Frantsay, ny Italianina, ny Belza, ny Tonizianina, ny Beninoà, ny Ivoarianina sy ny Thaillande.
Mba hahafahan’ny rehetra mandray anjara, noferana ho 450.000 Ar ny saran’ny fisoratana anarana. Hisahana izany i Eric, mpitsara nasionaly, izay nomen’ny federasiona ny andraikitra amin’ny fikarakarana. Afaka miantso ny laharana an-tariby 0340215412, ireo rehetra liana sy maniry ny hifaninana.
Vola be ho an’ny mpandresy
Lelavola, 26.450 Euros, no hozarain’ny federasiona senegaly, izay hitsinjara amin’ny fifaninanana roa. Eo ny “concours A”, hahazoan’ny mpandresy vola 10.000 Euros. Afaka manohy ao amin’ny “concours B”, indray ireo resy eo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona, tao amin’ny “concours A”, ka homena 1500 Euros, ny ho mpandresy.
Mandra-piandry ny fanombohan’ny fifaninanana, tsiahivina fa samy resy avokoa ireo ekipa malagasy roa niatrika ny “tournoi international d’Abidjan”, natao tany Côte d’Ivoire, ny asabotsy 7 sy ny alahady 8 avrily, lasa teo.
Lavon’i Maraoka, teo amin’ny ampahefa-dalana i Dolys sy i Nanou ary i Toutoune. Resin’i Côte d’Ivoire 5, izay nandrombaka ny fifaninanana, teo amin’ny manasa-dalana kosa i Ram’s sy i Taratra ary i Lipo.